Ungayisebenzisa kanjani i-App IO yezinkokhelo, ukubuyiselwa kwemali nokuxhumana 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Uma sinake ubuchwepheshe obethuliwe ngumbuso wase-Italy sizwile impela ngohlelo lokusebenza olusha lwe-IO, eyakhiwe yiPagoPA futhi ifakwa ngokukhululeka kunoma iyiphi i-smartphone futhi esetshenziswa yizo zonke izakhamizi zase-Italy. Abasebenzisi abaningi bazithola besenkingeni besebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-IO njengoba bevele balanda uhlelo lokusebenza kudivayisi ephathekayo ngaphandle kokwazi ukuthi bangayisebenzisa kanjani, yenzelwe ini, noma nokuthi bangangena kanjani, okungahle kubonakale zisuka nje. kungenzeki uma singakaze sizwe nge-SPID nobunikazi bedijithali (ngokudabukisayo kubalulekile ukuze sikwazi ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-IO).
Kulesi siqondisi sizokukhombisa ulusebenzisa kanjani uhlelo lokusebenza lwe-IO lokukhokha, ukubuyiselwa kwemali nokuxhumana kukahulumeni, ukwazi ukukhokha ngokushesha ezitolo futhi uzuze ezinhlelweni ezihlobene nokulawulwa kwemali nemiklomelo ebekelwe labo abasebenzisa amanani athile.
Ungalusebenzisa kanjani uhlelo lokusebenza lwe-IO
Isicelo se-IO silula ukusisebenzisa, kepha ukuze sikwazi ukusisebenzisa ngokusemandleni aso okokuqala kuzofanele ukuthi sithole i-SPID, bese uqhubeka nokulanda bese ufinyelela kuhlelo lokusebenza. Ezahlukweni ezilandelayo sizokukhombisa nokuthi ulifaka kanjani ikhadi lesikweletu noma ikhadi elikhokhelwa kusengaphambili nokuthi ungazithola kanjani izaziso mayelana nokuxhumana nabaphathi bakahulumeni.
Yenza kusebenze i-SPID bese ulanda uhlelo lokusebenza lwe-IO
Ngaphambi kokusebenzisa uhlelo lwe-IO kuzofanele ukuthi sakhe i-SPID, okungubunikazi bedijithali obuqinisekiswe ngqo yi-Italy State. Leli khadi likamazisi elikhethekile lingatholakala kubanikezeli abaningi, abalinikeza mahhala (ngakho-ke ngeke kudingeke silikhokhele lutho). Okwamanje abahlinzeki abangcono kakhulu bokuqalisa i-SPID ngokushesha Ngingu:
I-PosteID SPID inikwe amandla
I-SPID ene-ID yeNamirial
ID ye-Aruba SPID
Noma ngabe umuphi umhlinzeki omkhethayo, mane ugcwalise idatha edingekayo, khetha indlela yokuqinisekisa evumelana nathi kahle (ngokwesibonelo, ngePoste Italiane kuhle futhi ukuya eposini) bese uthola iziqinisekiso ze-SPID, ezizosetshenziswa ngokuhamba kwesikhathi kuhlelo lokusebenza lwe-IO. Uma sifuna ukwazi ukusebenzisa i-SPID igxathu negxathu, sikumema ukuthi ufunde imihlahlandlela yethu Ungayicela kanjani futhi uyithole kanjani i-SPID mi Ungayisebenzisa kanjani i-SPID: umhlahlandlela ophelele.
Ngemuva kokuthola i-SPID singakwazi landa uhlelo lokusebenza lwamahhala lwe-IO lwe-Android ne-iPhone ngqo kusuka ku-Google Play Isitolo naku-Apple App Store.
Faka ikhadi lesikweletu, elikhokhelwa kuqala noma ledebhithi
Lapho uhlelo lokusebenza selungeziwe kudivayisi yethu yeselula, vula, cindezela inkinobho Ngena ngemvume nge-SPID futhi sikhetha umhlinzeki we-SPID esakha ngaye i-digital.
Sifaka ikhodi yokufakazela ubuqiniso, siqinisekisa imininingwane etholwe ku-SPID bese samukela imibandela yokusetshenziswa kohlelo. Esikrinini esilandelayo sikhetha i-PIN yokuvimba enamadijithi ayi-6, sikhetha ukuthi sisebenzise ukufakazela ubuqiniso be-biometric futhi siqinisekisa ikheli le-imeyili (eselitholakele ku-SPID).
Uma usufaka isikrini sakho sohlelo lokusebenza singangeza ikhadi lesikweletu, ikhadi elikhokhelwa kusengaphambili (njengePostepay) noma ikhadi le-ATM ngokucindezela ezansi kwemenyu Isikhwama, ngokucindezela ngakwesokudla ngaphezulu kwento engezaUkukhetha i-athikili Indlela yokukhokha nokukhetha phakathi Ikhadi lesikweletu, ledebhithi noma elikhokhelwa kuqala, Ikhadi le-BancoPosta noma le-Postepay mi Ikhadi Lokukhokha. Senza ukukhetha ngokuya ngohlobo lwekhadi esinalo, bese sifaka inombolo yekhadi, usuku lokuphelelwa yisikhathi kanye nekhodi yokuphepha yekhadi (i-CVV2, imvamisa ngemuva). Ekugcineni siyachofoza Qhubeka nomsebenzi omuhle ukuqinisekisa ukwengezwa kwekhadi kuhlelo lokusebenza lwe-IO.
Ngemuva kokungeza indlela yokukhokha evumelekile kuhlelo lokusebenza lwe-IO, sifaka imenyu Mayelana nathi ngezansi ukuthola ezinye izici eziwusizo zohlelo lokusebenza: khokha intela yemoto, khetha ukuthi uzoyisebenzisa kuphi i- ivawusha yeholide, thola izexwayiso mayelana usuku olubekiwe lwezintela ze-IMU ne-TASI, thola isaziso mayelana nokuphelelwa yisikhathi kwe- IZWE (intela kadoti), ukhokhe imali yesikole futhi yenza kusebenze ukubuyiselwa kwemali.
Uma umasipala wethu ekhona phakathi kwalabo okukhulunyiwe (singakwazi futhi ukufaka umasipala ngesandla futhi sibone ukuthi ngabe uhlanganiswe yini nezinsizakalo zePagoPA) sizokwazi ukukhokha cishe yonke intela online, sisebenzisa enye yezindlela zokukhokha ezisekelwayo. Ngabe sinentshisekelo ekubuyiselweni kombuso? Kulokhu sikumema ukuba ufunde umhlahlandlela wethu Ungayisebenzisa kanjani i-State Cashback: amakhadi, izimo nemikhawulo.
Ungakuthola kanjani ukuxhumana okuvela ekuphathweni komphakathi
Ngaphezu kwekhadi, ingabe sifuna ukusebenzisa uhlelo lwe-IO ukuthola ukuxhumana okuvela ekuphathweni komphakathi? Kulokhu, kwanele ukugcina uhlelo lokusebenza lufakiwe ocingweni, ngoba ngokuxhumana ngakunye okusha kuzothunyelwa isaziso esikrinini (uma izaziso zingaveli, hlola izilungiselelo zokonga amandla, ikakhulukazi ku-Android). Ukuze ungaphuthelwa isaziso, singathumela nemilayezo evela kuhlelo lokusebenza lwe-IO kukheli lethu le-imeyili: ukwenza lokhu, mane uvule uhlelo lokusebenza lwe-IO ku-smartphone yakho, ungene ngemvume nge-PIN noma nge-biometric access, cindezela imenyu Iphrofayela, khetha imenyu Idlulisa imiyalezo nge-imeyili bese ekugcineni ucindezela into Nika amandla wonke amasevisi. Uma sifuna ukukhetha ngesandla imisebenzi esizothola kuyo imiyalezo ebhokisini lemilayezo engenayo le-imeyili, sikhetha into ethi Khetha isevisi ngenkonzo bese ukhombisa uhlobo lwemiyalezo esifuna ukuyithola.
Uma siqhubeka nokuba nezinkinga ngezaziso zohlelo lokusebenza lwe-IO, sincoma ukuthi ufunde imihlahlandlela yethu Uma ngabe izaziso zibambezelekile, cisha ukusebenziseka kwebhethri le-Android mi Thuthukisa izaziso ze-Android kusikrini sokukhiya.
Isicelo se-IO mhlawumbe sihamba phambili ezingeni le-IT elenziwe yi-Italy State: empeleni, uhlelo lokusebenza kulula ukulusebenzisa, luhlangana kahle nazo zonke izinsizakalo ze-SPID, ikuvumela ukuthi uthole imbuyiselo enikezwe ngumbuso, wenze kusebenze izinsizakalo zezaziso zentela nezintela nezinye izinhlobo zokuxhumana kwezikhungo, ngaphandle kokudinga ukuxhumana nekheli le-PEC (kodwa-ke, okunconyelwe ukuphendula imiyalezo etholakele).
Uma sifuna ukudala i-imeyili eqinisekisiwe yokuphendula kuma-imeyili ezikhungo, sincoma ukuthi ufunde i-athikili yethu. Ungalithola kanjani ikheli le-imeyili le-PEC (imeyili eqinisekisiwe).
Uma, ngokuphambene nalokho, sifuna ikhadi elihle elikhokhelwa kuqala ukuze lihlangane nesicelo se-IO, singafunda imibono yethu. Amakhadi wesikweletu wamahhala angcono kakhulu mi Amakhadi akhokhelwa kusengaphambili wokuthenga ku-inthanethi ngaphandle kwengozi.